Mozilla Inosvitsa Kutumira, Yakachengeteka Faira Kugovana Chishandiso | Linux Vakapindwa muropa
Mozilla inoenderera ichishanda pane nyowani uye yemahara software uye zvigadzirwa. Mozilla nguva pfupi yadarika yakatishamisa newebhusaiti yewebhu zvachose inoenderana nechero browser, ingave iri Mozilla kana kwete Chombo ichi chinonzi tuma Uye sezita rayo pacharo rinoratidza, inoshandiswa kutumira mafaera kana data pakati pevashandisi vari kure.
Kushanda kwayo hakuna kunyatsoita seemail asi inokutendera iwe kutumira mafaera evhoriyamu hombe, inosvika ku1 Gb yekugona. Ichi chinhu chinoitwa nemasaiti ewebhu zvishandiso nemasevhisi, asi zvakasiyana navo, Send ine mamwe mabasa anosiyanisa chishandiso cheMozilla kubva kune mamwe masevhisi.
Chinhu chikuru cheTumira ndiko kuvanzika kwayo. Kamwe mushandisi atumira chinongedzo, iye anogamuchira ane awa rimwe chete rekutora zvirimo kana chinongedzo chobviswa. Izvi zvinonyanya kubatsira kumatunhu panodiwa chengetedzo yakawanda. Zvakare kuita kufambisa faira nekuda kwekuomesa komputa, nekuda kwezvikonzero zvebasa, nezvimwe ...
Tumira izere inoenderana neese mabhurawuza ewebhuKunyangwe iine Midori mudiki, iri webhu application inomhanya senge peji rewebhu uye kwatinofanira kungodhonza iyo faira ratiri kuda kutumira kuti riite yekurodha link. Kana paine matambudziko, Send ine faira yekusarudza menyu, kuti zvive nyore kushandisa chishandiso.
Kana tangogadzira chinongedzo, mushandisi ane awa rimwe rekurodha zvirimo. Kamwe iyo awa kana mushandisi akarodha pasi zvirimo, iyo faira rinobviswa kubva kumaseva uye chinongedzo hachichashande.
tuma Iyo inovimbisa kuve chishandiso chikuru cheMozilla, chishandiso icho vazhinji vashandisi pasina mubvunzo vanoshandisa. Zvisinei, Tumira ichave budiriro yemamwe mapurogiramu akaita seFirefox, Thunderbird kana SeaMonkey?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Mozilla Inotumira Tumira, Yakachengeteka Faira Kugovana Chishandiso
Pawebhu inoti 24 maawa, kwete 1 awa.
Mr jakobho akadaro
Ini ndinoda MyAirBridge.com. Nekuti nebasa rino repamhepo ndinogona kutumira anopfuura 1 GB. Ini ndinogona kutumira kusvika ku20 GB zvachose yemahara uye pasina chero kunyoreswa.
Pindura Mr Jacob
RedHat Enterprise Linux 7.4 yave kuwanikwa